Mogadishu:Saldhiga Turkiga R/wasaare kuxigeenka Turkiga oo booqday…… – idalenews.com
Mogadishu:Saldhiga Turkiga R/wasaare kuxigeenka Turkiga oo booqday……
HWafdigii uu hoggaaminayay Ra’iisal wasaare ku-xigeenka Turkiga Hakan Jaush Ogolo oo maanta soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa booqday xarunta tababarka Militariga Soomaaliya oo Turkigu ay ka hirgeliyeen magaalada Muqdisho.
Waxaa wafdiga ugu horeyn si diiran u soo dhaweeyey R/wasaare kuxigeenka Soomaaliya Mudane Mahdi Maxamed Guuleed,mas’uuliyiin uu kamid yahay Wasiirka Arrimaha dibadd aee Soomaaliya,xildhibaano iyo Danjiraha Dowladda Turkiga u fadhiya Soomaaliya Olgan Baker.
Mas’uuliyiintani ayaa waxaa ay kormeer ku sameeyeen qeybaha uu saldhigaasi ka kooban yahay,iyagoo u kuurgalaya sida ay u socdaan howlaha tababarka Ciidanka Xooga Dalkaoo qeyb ka ah taageerada Turkigu uu u fidinayo Soomaaliya.
Waxaa hadlaasi hadalo ka jeediyay R/wasaare kuxigeenada Soomaaliya iyo Turkiga,iyagoo siweyn uga hadlay ahmiyada ay leedahay xoojinta xiriira walaaltinimo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Turkiga.
Booqashada Wafdiga R/wasaare kuxigeenka Turkiga ee Soomaaliya ooh al maalin ah ayaa waxaa la filayaa in uu la kulmo madaxda Dowladda Soomaaliya,iyagoo ka wada hadlidoona arrimaha xiriirka Dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga.
Muqdisho:Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga oo soo gaaray
Deg deg Qaraxyo:Dawladda Oo Sheegtay In Ku jiraan Muqdisho…..